Ny tontolo ankehitriny dia ara-bakiteny tototry ny fitaovam-pifandraisana, izay hampitombo haingana be fa tsy dia ny olon-tsotra mety ho sarotra indraindray ny hiatrika. Ny olom-pantatra mandritra ny fifandraisana lehibe ho an’ny olona sasany mba ho lavitra nofy. Be dia be ny olona hanokana fotoana bebe kokoa mba ny asa sy ny olana manokana, ho azo esorina sy tsy fifandraisana ary misy be dia be ny irery ny olona.
Azo antoka fa efa nahatsikaritra fa mahafinaritra ny Olona dia tena sarotra amin’izao fotoana izao. Satria mialoha izany dia mora kokoa, amin’ny zazavavy tsara tarehy mba hahafantatra. Amin’izao androntsika izao dia mora ampy mba mandehana any amin’ny trano famakiam-boky na ny dokotera. Sy ho toy ny fomba ny olom-pantatra amin’ny rosiana vehivavy ny nofy, na izany aza, dia tsy azo ampiharina. Na dia miezaka, dia inoana fa ny zavatra mety hitranga.
Ary izany no tena antony vitsivitsy: fampitandremana, ny tsy fahampian’ny fotoana (enta-mavesatra), tsy ny fahavononana hianatra eny an-dalana, sns. Fa izany tsy midika fa ny fitiavana ho an’ny fifandraisana matotra amin’ny tanjona ny mamorona ny fianakaviana iray, no tsy ho amin’ny daty. Tsy izy ireo tsy dia manan-danja toy ny teo aloha. Mifidy ny toerana ho an’ny olom-pantatra amin ny fanontaniana mikasika Ny hoe aiza no ahitana ny antsasany, ary ahoana no hahatonga ny tena mahaliana sy mendrika nofy vehivavy Ukraine dia tsy very ny actualité. Misy olona izay efa tena faniriana lehibe mba hahita ny tsara mpiara-miasa avy any Atsinanan’i Eoropa, ary miaraka aminy mba handany ny Sisa amin’ny fiainanao. Fantatrao tsy misy toerana azo antoka izay afaka hihaona ny antsasany.
Ary noho izany, dia misy Olana lehibe
Ny sasany meandering miezaka ny hampiasa ny Fialam-boly sy ny zavatra tiany mba hahita ny fitiavana ny fiainana. Ohatra, dia afaka ny ho fanatanjahan-tena am-pianarana, mandihy na ny fandrahoan-tsakafo, ny fampianarana, ny mozika na ny zava-kanto, sy ny Lomano ny Aterineto. Fa raha misy olona te-hahita ny nofy vehivavy iray avy any Okraina, Rosia na ny sampa tsy ampy amin’ny teny hafa firenena, dia tokony hisoratra anarana amin’ny Fiarahana amin’ny sampan-draharaha, mpiara-miasa fifanakalozana, Mampiaraka, Mampiaraka toerana, ny Fiarahana amin’ny Vavahadin-tserasera. Ireto manaraka ireto ny toerana mba hahafantatra amin’ny okrainiana nofy mpiara-miasa: — ny sampan-draharaha iraisam-pirenena-ny tambajotra sosialy — Tranonkala ho Fiarahana. Fanompoana mampiaraka — Mampiaraka toerana Mampiaraka an-tserasera ho maimaim-poana Isika dia toy ny ankehitriny, hiresaka momba ny fitiavana eo Mampiaraka Toerana ho an’ny fifandraisana matotra. Pejy ho an’ny fifandraisana matotra: ny Tsipiriany ny Toerana Mampiaraka, Mampiaraka an-Tserasera dia tsara ho an’ny olona izay manana kely loatra ny fotoana malalaka, tsy mety vadiny tao ny an-trano-panjakana dia afaka ny ho hita, izay manana ny soatoavina dia ny toetra ny okrainiana vehivavy toy izany koa. Matchmaking dia tsara, satria izay no ahitana ny olona afaka mahita nofy mpiara-miasa avy any Eoropa Atsinanana, mitovy ny tanjona sy ny zavatra mahaliana. Ity no tena mety, satria ny olona dia ho very tsy misy fotoana mifandray amin’ny zazavavy ny Rosia na Ukraine, izay manana tanjona hafa, na ny soatoavina. Mazava ho azy, mety hitranga, mba hahafahanao mihaona ny vehivavy Eoropa Atsinanana izay liana amin’ny vola na ny fiainana any ivelany. Izany matetika no mitranga rehefa handefa ny ankizivavy ao Rosia na ny zazavavy avy any Okraina ny sary maneho fa tena manana fiainana tsara. Ny diso voafidy sary dia afaka manimba ny zava-drehetra. Izany dia tsy dia sarotra ny nofy mpiara-miasa avy any Okraina ny fanambadiana. Izany no zava-misy fa maro ny nofy ny mpiara-miombon’antoka efa anaty trano fivoriana ny sampa tsy ampy amin’ny firenena tena manana faniriana lehibe ho mendrika ny olona mba hamorona azy mafy ny fianakaviana. Ianao miraharaha ny fihetseham-pony, fa ny fiainana dia miara-mitarika. Izy ireo no lehibe, amin-kitsimpo sy manao ny marina. Raha mitady ny tena nofy vehivavy ho an’ny fifandraisana matotra, ianao manana ny Fahafahana lehibe ny mendrika mpiara-miasa any Eoropa Atsinanana tamin’ny Fiarahana toerana
← Indiana Lahatsary Mampiaraka - Chatroulette Toerana
Toerana toy ny Chatroulette: maimaim-Poana Kisendrasendra ny Lahatsary amin'ny Chat Room →